रोचक Archives - PARIJATMEDIA
देवरानीले जेठानीको फेसबूकबाट आफ्नै संवेदनशील अंगको फोटो अरूलाई पठाएपछि…
शान्तिनगरमा बसोबास गर्दै आएका देवरानी सम्झना (नाम परिवर्तन) र जेठानी एन्जिला (नाम परिवर्तन) को सम्बन्ध राम्रै थियो। परिवार भित्र कसले कसलाई आदर गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरु बीच मनमुटाव सुरु भयो। उनीहरु सम्बन्ध राम्रो रहँदा एकले अर्काको फेसबुक खोलेर चलाउँथे। जेठानीलाई कसरी तह लगाउने भनेर सोच्न थालिन्। एन्जिलाको फेसबुक एकाउन्टको पासवर्ड सम्झनालाई थाहा थियो। गलत हर्कत अपनाउन सम्झनाले एन्जिलाको फेसबुक रोजिन् एन्जिलालाई सासुससुराले अलि बढी माया गरेको भान सम्झनालाई पर्न थाल्यो। उनले जेठानीलाई कसरी तह लगाउने भनेर सोच्न थालिन्। एन्जिलाको फेसबुक एकाउन्टको पासवर्ड सम्झनालाई थाहा थियो। गलत हर्कत अपनाउन सम्झनाले एन्जिलाको फेसबुक रोजिन्। जुन घट ना प्रहरीसम्म पुग्ला भन्ने उनले सोचेकीसम्म थिइनन्। फेसबुकको पासवर्ड फेरेर सम्झनाले गरेको उक्त हर्क तबारे एन्जिला बेखबर थिइन् र युवकलाई सन्देश पठाउँदा सम्झ
यदि तपाइँ यसपाली विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएको छ भने तपाईं प्रति केही रोमाञ्चक पक्कै हुनुहुन्छ । किनभने हिजो तपाईं जुन ढंगले बाँचिरहनुभएको थियो, अहिले त्यस्तो छैन । हिजो एक्लो हुनुहन्थ्यो । मनमौजी जीवन बाँच्नुहुन्थ्यो । साथीभाई, आफन्त जहाँ गएपनि हुन्थ्यो । खान र बस्नमा बेपर्वाह हुनुहुन्थ्यो । तर, आज तपाईंको कोही साथी छन् । जीवनभर साथ रहने वाचा गर्दै बाँधिएका साथी । अबको सम्पूर्ण दिन तपाईंले उनै पाटनरसँग बिताउनुपर्नेछ । तपाईंको खुसीमा उनी पनि रमाउनेछन्/छिन् । तपाईंको दुःखमा साथ दिनेछन् । सुख-दुःख सराबरी हुनेछ । यससँगै तपाईंका दायित्व पनि बढेका छन् । दाम्पत्य जीवनलाई कसरी सुखमय बनाउने ? अब यो कुरा तपाईंको लागि अहंम हुनेछ । विवाह गरेर मात्र हुँदैन । वैवाहिक जीवनलाई रसिलो र कसिलो बनाउनका लागि दुबैले उत्तिकै प्रयास गर्नुपर्छ । पार्टनरलाई कसरी खुसी बनाउने ? कसरी सुख दिने ? कसरी सन्तुष्ट तुल
खुल्यो यौन’बजार तर जोड’ले सास फेर्न र किस गर्न प्रति’बन्ध।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण लगाइएको लकडाउन विश्वभरी विस्तारै खुकुलो पार्न थालिएको छ । नेदरल्याण्ड र थाइल्याण्ड सरकारले आफ्नो देशका वेश्यालय र रे,डलाइट एरिया कडा प्रतिबन्धको नियमसहित खोल्न अनुमति दिएका छन् । यी देशमा अब यौ,नकर्मी र ग्राहकहरु रेडलाइट एरियामा जान पाउँछन् तर किस गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले जोडले सास फेर्न पनि पाउने छैनन् । बैंकक पोस्टका अनुसार थाइल्याण्डको राजधानी बैंककको रे,डलाइट एरिया ३ महिना बन्द रहेपछि १ जुलाइदेखि खुलेको छ । थाइल्याण्डका बार, काराओके भेन्यू, म,साज पार्लर आदि पनि खुलेका छन् । विगत ३७ दिनदेखि थाइल्याण्डमा कोरोना संक्र,मणको एउटा पनि स्थानीय केस नभेटिएपछि यहाँ यी व्यवसाय खोल्न अनुमति दिइएको हो । यससँगै हजारौंको संख्यामा रहेका यौनकर्मीहरु आफ्नो काममा फर्किएका छन्। रेडलाइट एरियामा जानेहरुले केही नियम पालना गरेर मात्र जानुपर्नेछ । उनीहरुले आफ्नो अनुहारबाट मास्
“आखिर किन लगाइन् यि,युवतिले अजिंगरको माला” ?
काठमाडौँ – कतिपय मानिसको अजिंगरलाई देख्दासाथ होश हवास नै उड्छ । तर कतिपय मानिसहरु भने अजिंगर लगायतका भयानक जनावरहरुसँग निकै न प्रिय सम्बन्ध कायम राख्न तल्लिन हुन्छन् । जसमध्येकी एक हुन् थाइल्याण्डको बैंककस्थित एक प्रदर्शनी हलमा घरपालुवा जीव जनावरको प्रदर्शनीमा सक्रियता देखाइरहेकी जनावर प्रेमी यि सुन्दरी । जसले आफूले पालेको अजिंगर प्रदर्शन गर्दै गरेको तस्विरले अहिले विश्वभर चर्चा पाइरहेको छ । नराम्रो प्रचार गर्ने तपाई को, साम्राज्ञीलाई सोभितको प्रश्न? यतिबेला कोरोनाले विश्व महामारीको रुप लिईरहेको बेला नेपाली सिने नगरी भने आलोचना र विवादको खेलमा रुमल्लिरहेको छ । यहाँ कहिले अन्तरबार्तामा सिमा विवादको कुरामा कलाकार चुकीरहेका छन भने देशको प्रदेश तथा जिल्लाको बारेमा नजान्दा सामाजिक सन्जालमा ट्रोलको सिकार संगै विवादित बनिरहेका छन् । यता पुराना कुरा कोट्याएर साम्राज्ञी राज्य
पसलमा महिला छिन् कि पुरुष हेर्छन्। महिला भए पुरुष ग्राहक आउन्नन्, पुरुष भए महिला। वरपर अरु ग्राहक छन् भने नजिकै आएर चुपचाप उभिन्छन्। जब पसलमा ग्राहक पातलिन्छन्, सुस्तरी माग्छन्, ‘ऊ दिनुस न।’ अधिकांश मेडिकल सञ्चालकले ग्राहकको हाउभाउका आधारमा भाषा बुझ्छन्, प्याकेट सिधै हातमा लिन पनि हच्किन्छन्। पत्रिकाले बेरेर, लुकाएर दिनुपर्छ। स्वाट्ट लिन्छन्, फटाफट हिँडिहाल्छन्। यस्तो व्यवहार देख्दा लाग्छ, ती व्यक्तिले जे किने त्यसको पोल खुल्यो भने बर्बादै हुन्छ। तर किनेका हुन्छन् क’ण्डम। शहरी दृष्य नै हो यो। समाज बदलिँदैछ तर शहर होस् या ग्रामीण भेग परिवार नियोजनको साधन क’ण्डमबारेको धारण उस्तै देखिन्छ। नेपाली बजारमा १५ रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका क’ण्डम पाइन्छन्। नेपालमा प्रयोग हुने सबैजसो कण्डम विदेशबाट आयात गरिन्छ। नेपालमा वार्षीक २१ करोड रुपैयाँ बराबरको क’ण्डम खपत हुन्छ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनकी श्रीमतीको परिचयसँग जोडिएको प्रश्नको जवाफ खोज्न गाह्रो छ किनकि त्यो प्रश्न रहस्यले घेरिएका किम जङ-अनसँग सम्बन्धित छन्। सन् २०१२ को गर्मीयामदेखि रि सोल-जु सार्वजनिक रुपमा देखिन थालेकी हुन्। केही समयपछि सरकारी सञ्चारमाध्यमले रि सोल-जु किम जङ-अनकी श्रीमती भएको बताउन थाले तर त्यसअघिको पनि उनको जीवन एउटा पहेली जस्तै छ। केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनी एक गायिका थिइन्।तर केही सञ्चारमाध्यमहरु रि सोल-जु राष्ट्रिय खेलकुद टोलीकी ‘चीयरलीडर’ भएको बताउँछन्। उनले कुरा गर्दै भनिन्, “रि सोल-जुको बिहे सन् २००९-१० मा भएको थियो। त्यसअघि उनी एक गायिका र चीयरलीडर थिइन्, उनले जापान र दक्षिण कोरियाको यात्रा पनि गरेकी थिइन्।” रि सोल-जुको जीवनबारे यो भन्दा बढी जानकारी उपलब्ध छैन। उनको उमेरबारे उत्तर कोरियाली शासकको तर्फबाट कुनै जानकारी उपलब्ध गराइएको छैन। तर रि सोल-जुको उमेर ३